tarihan’i Christian sy ny namany ny tontolonandron’ny omaly alahady 8 jolay 2018 dia rava tsy lera kosa ny fihaonana farany « Elite Régionale » nifanandrinan’ny Asa Ambohimanarina sy ny XV Avenir Andohatapenaka noho ny tsy fifankazahoan-kevitra nisy ka nanenjehan’ny mpilalao sasany ny mpitsara lalao mihitsy tamin’izany. Fantatra fa mbola nisy hatrany amin’ny 20 minitra tany ho any ny ora tokony mbola hilalaovan’ny roa tonta nefa dia io rava tsy lera tamotampoka io. Nitarika tamin’ny isa 6-3 ny Asa tamin’izany. Ny lalaon’ny D-1 ady omby nifanandrinan’ny Fitamiba Behoririka sy ny Tam 67 ha kosa dia nahitana ny fandresen’ny Fitamiba mazava 16 -9 ary vita hatramin’ny farany na dia nisy savorovoro niseho koa aza tany amin’ny fiafaran’ny lalao.
Ireo vokatra hafa :
1/2-famaranana D-2 Atsimondrano : Fta A/manalina 0 – 0 Voromahery A/tapenaka (nandresy tamin’ny fahazahoan’ity farany karatra men any Fta ; XV Pyramide 9 – 7 Ftaa
Famaranana ady omby nomen’ny CttV 2016-2017 : Cfa Basta 0 – 15 XV Cousin